Galmudug oo sheegtay in Gaalkacyo lagu qabtay rag lala xiriiriyay Shabaab | Dhacdo
Galmudug oo sheegtay in Gaalkacyo lagu qabtay rag lala xiriiriyay Shabaab
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle ayaa ka waramay hawlgalka ka socdo Magaalada Gaalkacyo, ka dib qaraxii dadka badani ku dhinteen ee Jimcihii ka dhacay magaaladaasi.
Wasiirka ayaa sheegay in uu socdo hawlgal xoogan, oo ay iska kaashanayan Maamulada Galmudug, Puntland iyo Saraakiil ka socoto dhanka Dowladda Federaalka.
“Sidii ay dhacdadu u dhacday ismiidaaminta ahayd ee dadka Saraakiisha u badani ay ku geeriyoodeen hawlgalo aad u xoogan ayaa magaalada laga sameeyay, ayadoo ay iska kaashanayan Galmudug, Puntland iyo Saraakiil Dowladda Federaalka ka socdo oo halkan noogu yimid.” Ayuu yiri Wasiirka oo la hadlay BBC.
Wasiirka ayaa sheegay in hawlgalka ay si hoose u wadaan laamaha ammaanka, xilli ay degantahay magaalada, iyadoo aan loo dareensiineyn dadka deegaanka.
“Hawlgaladaasi weli waa socdaan laamaha amniga ayaana si hoose u wada, magaaladuna aad bay u degantahay, iskaashigaas labada maamul-na waa jiraa, waana xooganyahay, dad-na waa lagu qabqabtay.” Ayuu yiri Wasiirku.
Mar la weydiiyay cidda ay hawlgalka ku beegsanayan ayuu sheegay in lagu dabo jooggo xubnaha kooxaha nabadiidka ka joogga magaalada, waxa uu qorshahoodu yahay iyo ciddii ka masuulka ahayd ismiidaaminta ka dhacday afaafka hore ee Garoonka Kubadda Cagta ee Cabdullaahi Ciise.
“Waxaa lagu raad jooggaa in la ogaado dadka magaalada ku jira, waxa u diyaarsan iyo ciddii soo maleygtay dhacdadaas ka dhacday Garoonka Cabdullaahi Ciise agtiisa ee ismiidaaminta ahayd, waxaas oo dhanaa la xooraaminayay, daba joogna lagu sameynayay. Dad la qabqabtay oo labada dhinac ahna waa jiraan, koley baaritaan ayaa lagu oran karaa dadkaas, waa dad la hubo.” Ayuu yiri Wasiir Falagle.
Dhanka kale Wasiir Falagle ayaa sheegay in magaalada uu shir uga socdo Madaxda Galmudug, Saraakiisha Ciidamada iyo dadka deegaanka, si iskaashi dhow looga yeesho arrinta amniga, dib dambena aanay Gaalkacyo uga dhicin dhacdadii Jimcihii oo kale.
Ismiidaamintan oo ay sheegatay Al Shabaab ayaa saamayn ku yeelatay bulshada ku dhaqan labada daamood ee Magaalada Gaalkacyo.